Beijing Winter Olympics "bia"
Were Beijing Zhangjiakou ụgbọ okporo ígwè dị elu ịga leta "ice na snow ọhụrụ obodo" mpaghara asọmpi Zhangjiakou dị na Chongli District, Zhangjiakou City, Province Hebei. N'ehihie nke 19, Nke a bụ ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè mbụ dị elu n'ụwa iji gaa Olympi ...
Otu esi eji igwe kwụ otu ebe iji belata abụba nke ọma abụrụla nsogbu maka ọtụtụ afọ. Oge oyi, ọkachasị, na-agbakwunye nsogbu ndị ọzọ na mbelata abụba. N'egwuregwu niile na-efu abụba, ịgba ịnyịnya ígwè iji belata abụba bụ nhọrọ kachasị mma maka mbelata abụba oyi, n'ihi na ọ nwere obere mmetụta na ahụ, agaghị adị mfe ...
Egwuregwu Olimpik nke Oge 2022 emeela ka mmepe nke egwuregwu oge oyi na China, yana ebe ntụrụndụ dị na mpaghara ọ bụla nke China. Na 2018 naanị, enwere ebe ezumike iri abụọ na itoolu mepere emepe, na ngụkọta nke 742. Ọtụtụ ebe ezumike ski ka anaghị arụ ọrụ nke ọma naanị otu ma ọ bụ obere anwansi c ...